Google Play Pass wuxuu ku fidaa Yurub oo dhan 570 barnaamijyo iyo ciyaaro ah | Androidsis
Google Play Pass, oo ka faa'iideysanaya soo bandhigida Pixel-ka cusub iyo Chromecast-kan cusub, ayaa laga bilaabay 24 dal oo cusub oo Yurub ah. Sidaa darteed, waxay ku dartaa wadar ahaan 34 adduunka oo dhan waxayna na keenaysaa 570 barnaamijyo iyo ciyaaro ah oo loogu talagalay kharashka bil kasta sida socodka Netflix, Spotify iyo kuwa kale.
Markay tahay bisha Luulyo waxay horeyba uga jirtay 9 dal, laakiin way yartahay haddaan xisaabta ku darsanno inay gaarayaan 34 oo tiro aad u badan ay hadda joogaan Yurub. Wadamadaas waxay ahaayeen Mareykanka, Jarmalka, Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Isbaanish, Ireland, Kanada, Australia, iyo New Zealand.
Google Play Pass wuxuu isu keenayaa daraasiin ciyaaro tayo sare leh iyo yaa ka soo gudbay xariiqyadan sanadahan xumaha wanaagsan ee mobilada naga wata. Kuwa aan fursad u helin inay tijaabiyaan, 5ta euro ee bishii ku kacaya iyo .29,99 XNUMX sanadkiiba, waa hubaal dalab adag oo u dhigma.
Madadaalo badan meelo badan! ? Google Play Pass ayaa hadda laga heli karaa 24 dal oo cusub! Dheh "haa" boqolaal ciyaarood iyo "maya" xayeysiisyada & iibsashada abka. Bilow: https://t.co/H6GOFinJrI #PlayPass pic.twitter.com/HffqPMmBtn
Taasi waxay tiri, kuwani waa wadamada sii daaya Google Play Pass:
Oo kulligoodna waxay heli doonaan inay helaan ciyaaro sida Stardew Valley, Dagaalkii aniga, ama Game Dev Tycoon iyo kuwa kale oo badan. Marka laga reebo barnaamijyo tayo leh si kor loogu qaado wax soo saarkeena taasina waxay noo oggolaan doontaa inaan ku raaxeysano dhammaan shaqooyinkeeda caymiska ee badanaa ku xaddidan nooca bilaashka ah.
Una Google Play Pass wuxuu ka bilaabmayaa dalal badan taasina waxay noo horseedaysaa inaan ku raaxeysanno khibrad dhan oo ah ciyaaro iyo codsiyo. Habka ugu fiican ee lagu iloobi karo freemium-ka maanta jira taasna waxay nagu hogaamineysaa inaanan u raaxeysan sida aan ku sameyno kombuyuutarrada ama ciyaaraha konsoleolka halkaas oo dhammaan waxyaabaha laga heli karo hal lacag bixin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Google Play Pass waxaa laga bilaabay 24 dal oo cusub oo Yurub ah: waxaa horey u jiray 570 barnaamijyo iyo ciyaaro ah